တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART IV | PoemsCorner
အပိုင်း ၃ မှ အဆက်..
တတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ အဝေးသင် အနီးကပ် ဆယ်ရက် သင်တန်းတွေ တတ်ကြရပါပြီ။
မိုးကတော့ သူ့ စကားအတိုင်း စဉ်းစားလျက် အချိန်ဆွဲ ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သူ က အချိန်ဆွဲလေ ။ တီကောင်ကို ဆားနဲ့ တို့ သလို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်လေပါပဲ
ဒါပေမယ့် . သူ့ ဆီမှ အိမ်က သဘောတူထားတဲ့ လူ မရှိဘူး ဟု ဆိုသဖြင့် ပြိုင်ဘက်မရှိ တစ်ဦးတည် ယှဉ်ပြိုင်လျက်ပါ။
နောက်ဆုံး မိုးက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို စာမေးပွဲ ပြီးမှ စဉ်းစားပြီး အဖြေပေးပါရစေဆို လို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲ ကြီးကတော့ စ ပါပြီ ။
ြ့ကားလိုက်ရတဲ့သတင်းအရ စာမေးပွဲကို ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေခဲ့ဘူးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲ ကျင်းပ မည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဟာ..လုပ်ချ လိုက်ပြန်ပြီ။ ကောင်းကွာ.. တစ်နေ့ ကို ငါးရာတော့ သေချာပေါက်ကုန်အုံးမှာပဲ။
ဒီ တစ်ကြိမ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဟာ ရင်းနှီးပြီးသား နေရာဟောင်းတစ်ခုလို ပင် အပူအပင် ကင်းမဲ့စွာ ရှိနေပါသည်။
ကျွန်တော် ထိုအထက်တန်းကျောင်းကို ရောက်သွားချိန်မှာတော့ ယခင်တုန်းက ယိုင်နဲ့ နဲ့ ဝင်းထရံများက အုတ်သား များဖြင့် အခိုင်အခံ့ ။
အိုဟောင်းနေသော ကျောင်းကြီး၏ ကျောင်ဆောင်များကလည်း သစ်လွင်တောက်ပ လျက်ရှိသည် ။
သူငယ်ချင်းများက ပြောသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ ကျောင်းသားများ ၏ ကောင်းမှူ့ ဟု ဆိုသည်။
နားလည် လိုက်ပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲ ဖြေစဉ် က နေ့ စဉ် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို ငါးရာ ကျပ်နှုန်ူး .နားလည်မှူ့ကြေး ဟူ၍ ကောက်ခံသွားသောာ ငွေ များ သည် ကျောင်းကြီး ၏ မွမ်းမံမှူ့ စရိတ် ဖြစ်သွား ချေပြိ ။
ကျောင်းဝင်းနံရံတွင် . ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ ကျောင်းသူကျောင်းသား များ ကောင်းမှူ့ ဟု ကမ္မည်း မတပ်ထားရုံ တမယ် ပင်။
သာ ဓု . သာ ဓု သာ ဓု…. ကောင်းလေစွ ပါတ ကား ။။
ယခုလည်း တတိယနှစ် စာမေးပွဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီ ကျောင်းလေး မှာပဲ ကျင်းပအုံးမည် ။
စာမေးပွဲ ခန်းစောင့် ဆရာမ များကို မျက်မှန်းတန်းမိ နေပါပြီ ။ မဖြေခင်ကပင် အောင်တော့မည့် စာမေးပွဲကို ကျောင်းသားများအားလုံးသည် လွယ်ကုစွာဖြင့် ကူ ယူ ဖြေဆိုလိုက်ကြပါသည်။
ယခင်ကလို မိုက်ကရို စက္ကူလေးများကိုပင် အားမကိုးတော့ပဲ ပြဌာန်း စာအုပ် (ဖတ်စာအုပ်) မျာကို ပေါင်ပေါ်တင်ကြည့်ကာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပင် အိနြေ္ဓ ရစွာ ဖြေဆိုနေကြပါသည်။
ကျောင်းသားတို့ ၏ ပုံစံမှာ စာမေးပွဲ ဖြေနေသည်နှင့်မတူ ပဲ ကျမ်းပြုဆရာကြီးများက အထောက်အထား ကျမ်းများကို ကိုးကာပြုစု နေကြသည်နှင့် ပို၍အလား သဏ္ဍန် တူပါသည်။
စာမေးပွဲ ဖြေဆို ပြီးချိန်တွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများက အလိုက်သိတတ်စွာဖြင့် ငါးရာကျပ် ကို မ . စ ကြရပါသည်။
အကြောင်းမသိသော အချို့ ဆရာမ ငယ်လေးများက ကြောက် သဖြင့်မယူ ရဲ ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း သေချာရှင်းပြ ပြီး အတင်းပေးလိုက်ကြပါသည်။
အချို့ စာမေးပွဲ ခန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခန်းစောင့် ဆရာမများက ကျောင်းကြီးမွမ်းမံရန် ဟု အကြောင်းပြကာ ပွင့်လင်းစွာ ပြောပြီး ပေါ်တင် တောင်းကြပါသည်။
္မဤသို့ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ၏ နောက်ဆုံးနှစ်အင်္ဂလိပ်စာ အဝေးသင် စာမေးပွဲသည် စာ တစ်လုံးမျှ ပင် တတ်ရန်ပင် မလို ပဲ ။ စာ ကူး တတ်ရုံးမျှဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ကြပါသည်။
အံ့ဘွယ် ဘနန်း ရှိလိုက်လေခြင်း ။
သူငယ်တန်းမှ ဆယ်တန်း အထိ စာမေးပွဲ ဟော့.. ဆိုလိုက်လျှင် အပတ်တကုပ် ကြိုးစားခဲ့ရ သည် ။
ယခုလို စာကူးတတ်ရုံဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သော စာမေးပွဲ ဟူ၍ အလျင်း မရှိပါတကား။
ယနေ့ လူငယ် . နောင် ၀ယ် လူကြီး ဆိုသည့် စကား အတိုင်းသာဆိုလျှင် .
ဤ သို့ ကြည့်ကူးပြီး ဘွဲ့ ရ အောင်မြင်သွားကြသော လူငယ်များ နောင်တချိန်တွင် . ကျွန်တော် တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ကြမည် ဆိုလျှင် .
အပျော်ဆုံး နေ့ တနေ့ 
စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ တွင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် က အိမ်သို့ တန်းမပြန်သေးပဲ သာကေတရှိ တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာ
ပတ်ဝန်းကျင်သည် လည်း လွန်စွာသာယာနေပါသည်။ ကျေးဌက်ကလေးများက လည်း အော်မြည် တွန်ကျူးနေကြသည်။ ပန်းကလေးများက လည်း အစီအရီ ပွင့်ဖူးနေကြသည်။ ထိုစဉ် သစ်ပင်ပေါ်မှ ရှဉ့် ကလေးများကလည်း ဟိုသစ်ကိုင်းမှ သည်သစ်ကိုင် ဆီသို့ လူးလာကူးပြေးနေကြသည်။
ယခုလို သာယာသော ညနေခင်းသည် ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက်များ တန်ခိုးရှင် တစ်ဦး ဦးက ရည်ရွယ်ဖန်ဆင်းထားသလို ပင်
ထုံးစံအတိုင်းပင် . အလိုက်သိသော သူငယ်ချင်းများ က ရှောင်ပေးသဖြင့် မိုးနှင့် ကျွန်တော် နှစ်ဦးတည်းသာ စကားပြောရင် လမ်းလျှောက်လာကြပါသည်။
ကျွန်တော် ကတော့ အခွင့်အရေး ရလျှင် ရသလို ပင်။ ပေါ်လာသည့်အခွင့်အရေးတို့ ကို လက်မလွတ်စတမ်း အသုံးချ လိုက်သည်။
မိုး ရေ.. ကိုယ်တောင်းထားတဲ့ အဖြေလေး နော်။
မိုးက မခို့ တရို့ လေးပြုံးနေသည်။ ရီဝေေ၀ ကြည့်ရင်း နှူတ်ဆိတ်နေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ တဖြည်းဖြည်းနှင့် စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပေ။
သို့ သော် . ယခုချိန်သည် သူ ပြုသမျှ နု ရမည့်ဘ၀ ။ ကိုယ်ကတော့ ရင်တမောမောဖြင့် သူ့ နှူတ်ဖျား မှ ပွင့်အာ ထွက်လာမည့် စကားသံကို မျှော်တလင့်လင့်။
အရိပ်အာဝါသ ကောင်းလှသော အပင်ကြီးတပင် ၏ အောက်သို့ အရောက်တွင် ဟိုဒီ ပြေးလွှားနေသော ရှဉ့်ကလေးများ ၊ တေးသံကျူးရင့်နေသော ဌက် ကလေးများ ကိုကြည့်ကာ ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကို ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့် ကို စကားတခွန်း ဆိုလိုက်သည်။
လပြည့်ကို တစ်ခု မေးမယ်နော်။
လပြည့်.. ဌက် ကလေး တွေကိုချစ်လား ။
ကျွန်တော်သည့် ချစ်သူ ထံမှ မထင်မှတ်ထားသော မေးခွန်းကို ကြားလိုက်ရသည့်အတွက် အံ့အားသင့် မိပါသည်။
သို့ သော် . အမေး ရှိလျှင်တော့ အဖြေရှိရမည်။ ထို့ ကြောင့် စ်ိတ်မပါ တပါနှင့် ပြန်ပြောလိုက်ရသည်။
ဟင်အင့် ..ကျွန်တော် ဌက် မချစ် တတ်ဘူး..ကျွန်တော်က..ကြောင်ပဲ ချစ်တာ.။
ကဲပါ..တိရစ္ဆာန်တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ လူ ကိုလဲ သနားပါအုံး..အဖြေတောင်းထားတာ ကြာလှပြီ ။ ဟို လို ဒီလို နဲ့ အမြဲ တမ်း အဲလိုပဲ။
ပြောရင်း ကျွဲမြီးတိုလာသည်။ ဒါကို မယ်မင်းကြီးမ က . တခစ်ခစ်ရယ် ရင်း . သဘောကျနေပြန်ပါတယ်။
မိုး သည် သစ်ပင်ကြီးကို အတန်ကြာအောင် စိုက်ကြည့်ရင်း ပြောလေသည်။ သစ်ကိုင်းပေါ်ရှိ ရှဉ့်ကလေးတစ်ကောင်က သစ်ချသီး အပုပ်တစ်လုံးကို ဆော့ကစားနေသည်။
မိုးက စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုလေသည်။
ကျွန်မ ကတော့ ရှဉ့် ကို ချစ်တယ် .
အော်.. ဟုတ်ကဲ့.. ချစ်ပေါ့.ကောင်းပါတယ်။ ရှဉ့်လေးတွေ ၊ ဌက်လေးတွေ ချစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကဲကွာ..မိုးကလည်း တိရစ္ဆာန်တွေ ပဲ ချစ်နေတာပဲ။ လူကိုလည်းသနားပါအုံး ။ တောင်းထားတဲ့ အဖြေလည်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ ကွာ။ ပေးပါတော့နော်။ ဒီမှာ တကယ်ရူးတော့မယ်။
ကျွန်တော်သည် . ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို တဆာဆာအော်တောင်းနေမိသည်။
လွန်စွာ မှလည်း စိတ်တိုလာပေပြီ ။ သူ့ မျက်လုံး၊ သူ့ လေသံ ။ သူ့ ဟန်ပန် အမူအရာတွေက ကျွန်တော့် ကို ချစ်နေမှန်းတော့ရိပ်မိသလိုလိုရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်.. တရားဝင် နှူတ်ဖြင့် ဖွင့်ပြောခြင်းကို အမှန်တကယ်ပင် အလိုရှိလှပါသည်။
ဒါကိုပဲ . သိသိကြီးနှင့် မူ နိုင်ရက်လေခြင်း ။
သူ က ပြောပြန်သည်။ ကဲပါ လပြည့်ရယ်. ထွက်လာတာလည်း ကြာပြီ ။ ပြန်ကြရအောင်နော်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း စောင့်နေ ရော့ မယ်။
ကျွန်တော်သည် . လွန်စွာ မျော်လင့်ချက် မဲ့သွားသလိုပင် ခံစားလိုက်ရသည်။ လှပသော စိတ်ကူရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းသော ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲတွင် ချစ်သူ ထံမှ အဖြေကို ဧကန်မုချ ရလိမ့်မယ် ဟု တွေးထင်ထားသော်ငြားလည်း . တကယ့်လက်တွေ့ တွင်မူ . အဓိပ္ပာယ် မရှိလှသော အမေးအဖြေများဖြင့်သာ အချိန်ကုန် ကာ ပြီးဆုံးခဲ့ရလေပြီ။
ထို့ ကြောင့် . ရင်ထဲတွင် ကြိမ်မီးအုံးသလို ပင် လွန်စွာမှပင် ပူလောင်လျက်ရှိသည်။ အာခေါင်တို့ သည်လည်း ခြောက်ကပ် လျက်ရှိသည်။
ပါးစပ်မှလည်း မည်သည့်စကားကို ပြောရမည်မှန်း ပင် မသိတော့ချေ။
မိုးကတော့ . ထိုင်ရာမှ ထက . သွားဖို့ ဟန်ပြင် ချေပြီ။
ကျွန်တော်သည် . ဆက်ခနဲ ဆိုသလိုပင် ၊ မိုး၏ လက်ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်သည်။ လွန်စွာ အားကောင်းသော ဗြုတ် တူ နဲ့ ဖမ်းဆွဲခံ လိုက်သည့်အလား မိုးသည် မျက်လုံးကလေး ပြူးကာ အံ့သြမင်သက် လျက် ၊ ကြောက် လန့် လျက်ရှိသည်။
ကျွန်တော့်ကို ကြောင် ကြည့်နေသော မိုး အား . ကျွန်တော်သည် . ကတုန်ကယင် နှင့်ပင် အဖြေကို တဆာဆာတောင်းနေမိသည်။
မိုးကွာ.ကိုယ့်ကို အဲသလို မလုပ်နဲ့ ကွာ။။ကိုယ်တောင်းထားတဲ့ အဖြေလေးတော့..ပြောခဲ့ပါကွာ..ပြောခဲ့ကွာ မရဘူးကွာ။
ယခုချိန်တွင်တော့ လူပမာ အမဲခြောက်တောင်းသလိုပင် ဖြစ်ချေပြီ။
သည်တော့မှ ။ မိုးက . သူ့ ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာကို မထုံတတ်သေး ပုံစံလုပ်ကာ ။
လပြည့်ရယ်။။ နင်ကလေ . တခါတလေ အရမ်း အ တာပဲ သိလား။။
နင် လို ချင်တဲ့အဖြေ ဘယ်နှစ်ခါ ပေးရမှာတုန်း ။ ဒါလေးတောင် မသိဘူး…သိပ်တုံးတာပဲ နော်။။
မိုးက ချစ်နှူတ်ခမ်းလေးကို စူ ကာ ကလေးတစ်ယောက်လို တတွတ်တွတ်ပြောနေပုံများ လွန်စွာ ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်လေခြင်း။
ဒါနဲ့ နေပါအုံး . သူ ပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို အဖြေ ပေးပြီး ပြီတဲ့..ဘယ် စကားများတုံး..ဘယ် တခွန်းလဲ.
ကျွန်တော့်ကို ချစ်ပါတယ် လို့ … ကျွန်တော် လုံးဝ ပင် မကြားမိတာ အမှန်ပါ။
ဒီတော့ . ပို ပြီး စ်ိတ်တိုရပြန်ပါတယ်။ မိုးနော်.. အဲသလို မလိမ့်တပတ် မလုပ်နဲ့ ..ဘယ်မှာ အဖြေပေး ရသေးလို့ တုန်း ။ စိတ်တကယ် တို လာပြီနော်။
သူ့ ပခုံးနှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ တကိုယ်လုံး ခါရမ်း ပစ်လိုက်မိသည်။ သူကတော့ မပွင့်တပွင့်ပြုံး ရင်း ရယ် နေသည်။ မိုး ပုံစံသည် ကျောင်းဆရာမကြီး က စာမရသော တပည့်လေး တစ်ဦးကို စာစစ်နေသည့်ပုံနှယ်။
လပြည့်..လပြည့်…အော်..လပြည့်ရယ်။။ သေချာလည်း စဉ်းစားပါအုံး ကွယ်။
ကျွန်တော်သည် သူ ပြောခဲ့သော စကား လုံးများကို တမုတ်ဟုတ်ချင်း ပြန်လည်ကာ စဉ်းစားလေသည်။ ဒီ ဥယျာဉ် ကြီးထဲသို့ နှစ်ဦးသားဝင်ရောက်လာသည်။ မိုးက ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းတွေ မေးသည်။
တိရစ္ဆာန် များအကြောင်းသာ။။ ထို့ နောက် သူ နောက်ဆုံး ပြောသွားသော စကား..
ကျွန်မ ကတော့ ရှဉ့် … ရှဉ့်…. အိုး ဟိုး.
ကျွန်တော်သည် မျက်လုံးထဲတွင် အလင်းရောင် ကို လျစ်ခနဲ မြင်လိုက်ရသလို ပင် ချက်ချင်းပင်နှူတ်ခမ်းမှ .
ဟုတ်ပြီ..ဟုတ်ပြီ… ဟု ယောင်ယမ်းကာ ၊ ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ် မိလေသည်။
ရင်ထဲတွင်လည်း မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် ပင် အမှန်ပင် ၀မ်းသာမိလေသည်။ ကျယ်လောင်လှသော ကျွန်တော့်အသံကြောင့် . သစ်ကိုင်းပေါ်မှ ဌက်ကလးများကလည် . ထ ပြန်သွားလေပြီ။ ရှဉ့်ကလေးများကလည်း သစ်ခေါင်းထဲသို့လစ်ကနဲ ၀င်ပြေးပုန်းကြသည်။
လေပြေကလေးများကလည်း ပန်းကလေးများကို ညင်သာစွာ ပုတ်ခတ်ဆော့ကစားသွားကြပြီးနောက် ကျွန်တော့် ချစ်သူ ၏ ဆံနွယ်လေးများဆီသို့ တဖန် လာရောက် လှူပ်ယမ်း ဆော့ကစားသွားကြသည်။
ညနေချိန် ပုဇွန်ဆီရောင် နေခြည်များကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့အသစ်စက်စက် ချစ်သူလေးမျက်နှာပြင်ဝယ် ၀င်းပ စွာ ခ.ယ နေကြသည်။
ထိုစဉ် မိုး ၏ မူပိုင် အမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည့်. ပါးချိုင့်ကလေးကို ထင်ပေါ်စွာပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကို ငေး ကြည့်နေပုံလေးသည် ကျွန်တော့်တသက် တွင် ဘယ်လို မှ မမေ့နိုင်မည့် မြင်ကွင်း . နှလုံးသားထဲ၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွင် တသက်လုံး ကမ္မည်းတင်ထားမည့် ကမ္ဘာကျော်သည့် အပြုံဟု ဆိုလျှင် လွန်မည် မထင်ပေ။
ဟေး……မိုးက..ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် တဲ့ဟော့..ဟေးးးးးး
ကျွန်တော်သည် လိုချင်တာရသည့် ကလေးငယ်တဦးပမာ ၀မ်းသာ လွန်းသဖြင့်. ကျယ်လောင်စွာ ဟစ်ကြွေးလေတော့သည်။
ထိုသို့ . ၀မ်းသာကြည်နူးနေသည့်အချိန်တွင် . ဘေးနားမှ သူငယ်ချင်းများကလည်း ၀ိုင်းအုံလာသဖြင့် . မကြေငြာရပဲနှင့် မောင်းခတ်ပြီးသားဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော်၏ အိမ်အပြန်လမ်းသည် လွန်စွာလှပပါသည်။
ကားပေါ်တွင် ချစ်သူ အသစ်စက်စက်၏ လေးဖ၀ါးနုနုလေးကို ကိုင်ရင်း ဖြင့် ရင်ထဲတွင် တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ကာ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ရပါတော့သည်။
ချစ်သူရဲ့ လက်တစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်းသည် ကမ္ဘာ တစ်ခြမ်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အော်..ယခုတော့လည်း လပြည့်တစ်ယောက် ပညာစုံတော့.ကြင်ယာပါ စုံလေချေပြီ။
စာမေးပွဲလည်း ပြီးရော စုတ်ရော လာဘ် ရောဝင်သည် ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်သည် အဝေးသင်စာမေးပွဲပြီးသည့်နေ့ တွင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ချစ်သူ တစ်ယောက်ရလေသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စာတင်ရလောက်အောင် အလွန်ချစ်ကြပါသည်။
မိုးက..ကျွန်တော့်ကို မောင် ဟူသော နာမ်စားကို ပင် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲ လေပြီ ။ ကျွန်တော်ကလည်း ခါတိုင်းထက်ပင် မိုး ကို ပိုမို ၍ ဂရုစိုက်ပါသည်။ အရာရာတွင် မိုးကိုသာ ဦးစားပေးပါသည်။
ယခင်က ကြေးအိုး စားသည့်အခါ ၀က်သား ကြေးအိုးကိုသာ စားလေ့ရှိသော်လည် ယခုအခါတွင် မိုးနှင့် အတူစားတိုင်း ကြက်သားကြေးအိုးကို ပင် မှာယူစားသောက်တော့သည်။
ယခင်က လက်ဖက်ရည် မသောက်တတ်သော်လည်း ယခု အခါ မိုး သောက်လေ့ရှိသည့် ပေ့ါဆိမ့်ကိုပင် လျှာပေါ်ဝယ် စွဲလောက်အောင် သောက်မိနေပေပြီ။
ထို့ ပြင် ကျွန်တော်သည် အချစ်နှင့် ပတ်သက်လျှင် စိတ်ကူးယဉ်ကာ မိုးကို လက်ဆောင်တစ်မျိုးပေးထားပါသည်။
ထို လက်ဆောင်သည် မိုး အတွက် လွန်စွာ အသုံးဝင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
နံနက်မိုးလင်း သည်နှင့် မိုးသည် ကျွန်တော် ပေးထားသော သွားပွတ်တံဖြင့် သွားတိုက်ရပါသည်။ ပြီးနောက် မျက်နှာသုတ်ပ၀ါမှ အစ နံနက်စာ သုံးဆောင်သည့် ကော်ဖီ ခွက် အထိ ကျွန်တော့် အငွေ့ အသက်များဖြင့်သာ လွမ်းခြုံထားပါသည်။
ည အိပ်ရာ ၀င်လျှင် လည်း ကျွန်တော် ၏ ကိုယ်ပွား အဖြစ် ဖန်တီးထားသော . POLAR BEAR ၀က်ဝံ အမွေးပွ ရုပ်ကြီးကို ဖက်ကာ အိပ်စက်အနားယူစေပါသည်။
မိုးသည် နှင်းဆီပန်းလေးများကို မြတ်နိုးတတ်သည်။ စံပယ်ပန်းကို မူ နှစ်သက်သည်။ သစ္စာ ပန်းကို တန်ဖိုးထားသည်။
ကျွန်တော်သည် မိုး က စိတ်ကောက်တတ်သည့်အခါတိုင်း ရဲရဲနီသော နှင်းဆီပန်း ငုံ လေးများ ကို လက်ဆောင်ပေးတတ်သည်။ အဆိုပါ နှင်းဆီပန်းများ ဖူးပွင့်လာသည့်အချိန်တွင်တော့ မိုးတစ်ယောက် အပျော်ကြီးပျော်ကာ ကျွန်တော့်အား စိတ်ဆိုးပြေလေတော့သည်။
မိုးက သနပ်ခါး လေးများကို ပါးနှစ်ဘက်တွင် သပ်ရပ်လှပစွာလိမ်းသည့်နေ့ တိုင်း ကျွန်တော်က စံပယ်ပန်းလေးများကို သူ့ ခေါင်းတွင် ယုယ စွာ ပန်ဆင်ပေးရလေသည်။
နှစ်ဦးသား ရွှေတိဂုံ ဘုရားကိုသွားသည့်အခါတိုင်း အောင်သပြေ နှင့် သစ္စာပန်းကို မ၀ယ် မဖြစ်ဝယ်ရသည်။ နှစ်ဦးသား ဘုရားကိုအာရုံပြုရင်း ချစ်သူနှစ်ဦး သစ္စာပြုဆုတောင်းသည် ။ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော သစ္စာပန်းခိုင်လေးများကို ကိုင်ကာ သစ္စာပြုသည့် မိုး စိတ်ကူးကို ကျွန်တော်သည် လွန်စွာကဗျာဆန်သည် ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ရည်းစား မဖြစ်ခင်ကတည်းက သူ၏ သူငယ်ချင်းများ မှ တဆင့် မိုး၏ စိတ်အခြေအနေကို မေးမြန်းလေ့လာခဲ့ဖူးသည်။
မိုးသည် တစုံတခုကို စ်ိတ်အလိုမကျ စိတ်ဆိုးနေလျှင် . နှူတ်ခမ်းနီ . အနီရောင်ရင့်ရင့်ကို ခပ်ထူထူကြီး ဆိုးတတ်သည်။ မည်သူနှင့်မျှလည်း စကားမပြောတော့ပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်သည်။
ရေခဲမုန့် နှင့် ချောကလက်တို့ ကို လွတ် ကြိုက်သည်။ ကျွန်တော်က ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြကာ ပိတ်ပင်လျှင် နှူတ်ခမ်းလေး စူကာ မကျေမနပ်ပြန်ပြောလေ့ ရှိသည်။
စိတ်ကောက်လွယ်သော်လည်း စိတ်ဆိုးခဲသည်။ ထို့ ပြင် ရည်မှန်းချက် ကြီးသော မိန်းကလေး တစ်ဦးဖြစ်သည်။
မိုး ကလည်း ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်သည့် အားကစားဂျာနယ် (Eleven Journal) များကို နံနက်စောစောထ က ၀ယ်ထားတတ်သည်။ ကျွန်တော် အိပ်ယာမှ နိုးလျှင် ဖုန်းဆက် ကာ . မန်ယူ မှ ဘယ်သူက ဂိုးသွင်းလိုက်ကြောင်း ၊ ရီးရဲယ်မှ ဘယ်အသင်းကို နိုင်သွားကြောင်း ဖုန်းဆက် အစီရင်ခံလေသည်။ မိန်းမသားတန်မဲ့ .ကျွန်တော် ၀ါသနာ ပါသော ဘောလုံးကို သူကလည်း ကျွန်တော့်အကြိုက်လိုက်ကာ ၀ါသနာ တူ ညှိလေတော့သည်။
ကျွန်တော် ၀တ်လေ့ရှိသော တီရှပ် များ ၊ စွပ်ကျယ် အကျီ င်္ များ ၏ ဗယ်ဘက် ရင်အုံ နေရာ တွင် မိုး ဟူသော နာမည်လေးကို ရေးထိုး ပေးလေ့ရှိသည်။
ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန် အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေ တိုင်း ကျွန်တော့် လက်ကလေးကို ဖွဖွလေး ကိုင်ကာ အားပေးတတ်သည်။ ကျွန်တော့် အပေါ် နားလည်မှူ့ အပြည့်ရှိသည် ဟု ခံစားမိပါသည်။
မိုးသည် ကျွန်တော့်အတွက် အချစ်ဦးလည်း မည်ပါ၏ ။ အချစ်ဆုံး လည်း မည်ပါ၏ ။
ဤလောက တွင် မိုး ထက် ပိုမို ၍ ချစ်ရမည့်သူ မရှိနိုင်တော့ ပေ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယေက် ၏ ချစ်သူ ဘ၀သည် မိုးမမြင်လေမမြင် ချစ်ကြရင်း အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့ပါသည်။
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ…အပိုင်း ၅ . (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) တွင် ဆက်လက် အားပေးတော်မူကြပါခင်ဗျာ
Leave comment No comment & 577 views